Khaddar m Askar & xiigmada manta ) isha mari qoralkan - www.dhanbaalnews.com
Khaddar m Askar & xiigmada manta ) isha mari qoralkan
Hargaysa (DHML) XIKMADA MAN
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>.
– Waxa uu waayuhu I baray in shay kastaaba ku bilowdo yari dabadeedna koro (Weynaado) Masiibadu se ay ku bilaabanto weyni kadibna ay yaraato, sidaa awgeed marka ay masiibo dhacdo ay tahay in aan u sabro inta ay yaraanayso.
– Waxa aan bartay in damiirku uu yahay Qof igu lammaan oo mar kasta oo aan gef ku kacayo ii sheego in cidi I arkayso.
– Waxa aan bartay in mar walba aanay qasab ahayn in aan guulaysto, laakiin ay qasab tahay in aan mar kasta ku fikiro sidii aan u guulaysan lahaa.
– Waxa aan ogaadey in qofka uu dakhligiisu yahay Malyuunka Shilin aanu Kun jeer ka shaqo badnayn ka dakhligiisu yahay Kun Shilin ee sirtu ay tahay sida maskaxda looga shaqaysiiyo uun.
– Waxa aan ogaaday in Oorida fiicani ay tahay ta quruxda ku beerta Qalbiga ninkeeda.
– Waxa uu waayuhu I baray, in ceebtu aanay ahayn in aan meel sare ka soo dhaco, balse ay tahay in aan fanan kari waayo.
– Waxa aan ogaaday in haddii uu qofku waayo mabda ‚uu dartii u dhinto in aanu helayn wax uu dartii u noolaadana.
– Waxa uu waayuhu I baray in ay ceeb tahay in dhagax qudha aan laba jeer kuwada turaanturoodo.
– Waxa aan bartay in dadku ay illaabayaan dhaqsaha aad hawl ku fuliso, balse ay weligood xasuusnaanayaan waxa aad qabatay, markaasaan iska dhaafay degdegga, xooggana saaray sidii aan hawsha u qaban lahaa sida ugu quruxda badan muddaba ha qaadato ee.
– Waxa aan bartay, hadyad yar oo aan la filaynin in aan bixiyaa ay ka qiimo badan tahay hadyad aad u weyn oo qofka aan siinayaa sii og yahay.